China Ink Remover BT-301/302 Mugadziri uye mutengesi | BGT
BT-301/302 imvura yekubvisa chero ruvara rwePP uye PE zvinhu zvisina kana tembiricha inodiwa.
Izvo ndezve PP Knitting Bhegi yekudhinda inki kubviswa.
BT-301/302imvura yekubvisa chero ruvara rwePP uye PE zvinhu zvisina kana tembiricha inodiwa. Yakaedzwa zvichienderana neingi yekudhinda pane chero bhegi remufirimu zvese kumba nekune dzimwe nyika. Inogona kutsanya uye zvinobudirira kuchenesa zvekumberi yekudhinda inki uye imwe smudge inokonzeresa kusvibiswa kwezvakatipoteredza pamusoro pekudzokorora PP Knitting Bag uye kudzosa yakachena uye chena ruvara rwezvinhu.
Pashure: Transparent Masterbatch BT-805/820
Zvadaro: PET chinamirwa Remover BT-336